30 taona – Bodo : Mangataka raki-tsarin’ny mpankafy
11/09/2018 admintriatra 0
Efa ao anatin’ny fankalazana sy ny fanomanana ny faha-30 taona. Ankoatra izay hotanterahina etsy amin’ny Lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina ny 30 septambra izao dia manolotra seho maromaro amin’ireo toerana handalovany i Bodo. Efa niteny an’i Eoraopa …Tohiny
Donia 2018 : Tsy hampiova ny fanemorana
Miditra amin’ny andiany faha-25. Raha isaka ny faran’ny herinandron’ny pantekôty no nanatanterahana azy hatramin’izay, dia nahemotra ny 26 ka hatramin’ny 30 septambra izao ny hetsika Donia any Nosy Be. « Tsy hisy fiantraikany amin’ny lazan’ny …Tohiny
Ho an’ny ankizy : Raikitra ny « antsika hisôma an-dakoro »
Mbola ao anatin’ny fialan-tsasatra ny ankamaroan’ny ankizy. Raha efa maro ireo variana amin’ny finday sy ny lalao amin’ny alalan’ny video, dia miezaka mamerina ireo kilalao fahiny kosa ny ivon-toeran’ny kolontsaina malagasy na ny IKM etsy …Tohiny
Ambohipo : Môtô 102, fiara 8 kilan’ny afo
Môtô 102 sy fiara miisa 8 ary trano efatra may kilan’ny afo tanteraka tao amin’ny toerana fitobiana fiara teny amin’ny fokontany Ambohipo, ny alin’ny alahady tokony ho tamin’ny 12 ora alina. Io no vokatry ny …Tohiny
Folo taona vao mitsahatra ny fe-potoana ahafahana manenjika olona amina heloka be vava tahaka ny “raharaha 26 janoary 2009”, izay namoizana ain’olona mihoatra ny 500 ary nandravana sy nandrobana magazay sy tranombarotra an-jatony maro nanerana ...Tohiny
Fanokafana ny taom-pitsarana : Tokony ho tazana eo anivon’ny fitsarana ny fisandratana